Gini kpatara ihe eji eme ihe jikota ihe bu ihe di nkpa ka ndi otu gi nwee oganihu | Martech Zone
Hightail eweputala nsonaazụ nke mbụ ya Steeti nke Creative Collaboration Survey. Nnyocha ahụ lekwasịrị anya n'otú ndị ahịa na ndị ọrụ okike si arụkọ ọrụ iji nyefee ugwu nke ọdịnaya mbụ dị mkpa iji mee mkpọsa, nyefee nsonaazụ azụmaahịa ma bawanye ahịa na nnweta.
Enweghị akụrụngwa na ụba chọrọ bụ ihe na-emebi ihe
Site na ọdịnaya na-eto eto na ụlọ ọrụ ọ bụla, mkpa maka ọdịnaya pụrụ iche, nke na-akpali akpali, ihe ọmụma, na ogo dị elu bụ ụbọchị zuru oke. Nchọgharị algorithms chọrọ ya, netwọk mmekọrịta na-eme nke ọma na ya, azụmaahịa na-erite uru na ya. Agbanyeghị, ka ihe a na-achọ na-arị elu, a na-akụpịa ihe okike.
Ihe kariri ndi ahia 1,000 na ndi okike okike zara, na-enye ntinye na usoro mmekorita ihe ha bu ihe na-enye obi ojoo, na-abaghi ​​uru na, na-egbochi ogo nke ihe okike. Usoro na-adịghị arụ ọrụ, nke agbajiri agbawa maka imekọ ihe ọnụ na-akpata nchekasị, na-emebi mmụọ omume na mmetụta na-adịghị mma nke imepụta ihe okike.
Ọdịdị dị elu dị elu dị elu na-eme ka uto. A na-ama ndị na-ere ahịa aka ka ha nwee ike ịbawanye ụba ma mepụta ọdịnaya mbụ nke ahaziri iche, nke dị mkpa, na-ezute ụkpụrụ nduzi na nke kachasị mma, ma nwee nnukwu mkpa iji otu akụrụngwa ahụ mee ya. Nsogbu a na-eto ngwa ngwa karị na ndị kachasị mma na-achọ ụzọ ọhụụ iji rụkọta ọrụ - site na ịtụrụ ime ruo na mmecha - iji mezuo ọchịchọ a na-eto eto. Onye isi ụlọ ọrụ Hightail, Ranjith Kumaran
87% nke ndị okike kwenyere na ọ dị mkpa maka nzukọ ha ka ha jigide ogo ọdịnaya ka ọ dị mfe ịba ụba akụ ndị dị ugbu a iji gboo mkpa ọdịnaya ahụ.
77% nke ndị na-emepụta ihe na-ekwenye na nyocha ihe okike na usoro nnwapụta bụ nrụgide
53% nke ndị okike kwuru na nrụgide na-arịwanye elu bụ n'ihi ọtụtụ mmadụ na-etinye aka na nyocha na ihu ọma ọdịnaya
54% nke ndị okike kwenyere na ndị ahịa azụmaahịa ha kwụsịrị, n'ihi nrụgide ahụ
55% nke ndị okike na-echegbu onwe ha maka imezuwanye mmụba na-arịwanye elu maka ọdịnaya dị elu
Ihe kariri 50% nke ndi okike kwuru na akuku nile nke usoro okike ha bu nsogbu
Ọ bụghị “naanị” nsogbu ahịa, ọ na-ewute azụmahịa niile
Usoro mebiri emebi na-efu ezigbo ego, na igbu oge na-esonyere iji nwayọọ na-eto eto:
62% kwere oge na ego na-efu mgbe ị na-edozi nghọtahie na nghọtahie ndị sitere na usoro gbajiri agbaji.
48% na-ekwu na ha ego a na-enweta n'ego emebiela n'ihi na ha enweghị ike ịnye ọdịnaya dị mma na oke ọsọ ọsọ;
58% kwuo ịba ụba ahịa na ego ha nwetara bụ uru kasịnụ azụmaahịa na-edozi ihe ịma aka na usoro mmekorita okike
63% na-ekwu na ha bụ enweghị ike ịnwale ihe okike dị iche iche dika ha chọrọ, na-amachi mmetụta nke itinye ego na mgbasa ozi ha
Ndị otu na-achọ ụzọ ka mma iji rụkọta ọrụ
Agbanyeghị na ndị na - azụ ahịa na ndị otu ihe nwere ike ime mkpesa, 85% na - ekwu na ịrụkọ ọrụ ọnụ na mmekorita - mgbe ọ dị mma - nwere ike ịbụ otu akụkụ kachasị mma nke ọrụ ha. Ọ bụ ezie na ọmụmụ ahụ kpughere na 36% kwenyere na enweghị teknụzụ teknụzụ iji dozie nsogbu ha na-eche ihu na mmekorita ihe, nke ahụ abụghị eziokwu.
Anyị na-ahu nagide Hightail anyị na ndị ahịa anyị iji nyere ndị ahịa aka nyochaa eserese, ihe eserese, pọdkastị, na vidiyo. Ihe ikpo okwu na-enye nhicha dị ọcha maka echiche nke otu, njikwa ihe onwunwe, visibiliti, nzaghachi, na nnabata.
Tags: njikwa arịa mmụta egonkwenye okikeihe mmekotanzaghachi okikeusoro okikeìgwè ndị okikeechichenyochaa nyochaotu
Ezigbo akụkọ Doug!
Nke a bụ ihe ọzọ kpatara ndị na-emepụta ihe ji achọ ngwa ọrụ mmekorita-ha nwere ike ịkwalite nrụpụta ha nke ukwuu site n'ịrụ ọrụ n'ụlọ ma ọ dịkarịa ala ụbọchị ole na ole n'izu.
Lee, usoro okike chọrọ oge ịnọ naanị jụụ iji mepụta ihe. Ugbo Cubicle emebiwo nke ahụ n'ebe ọrụ, n'ọtụtụ akụkụ. Ọ na-esiri ike ịbanye na Mpaghara ahụ wee nọrọ ebe ahụ ogologo oge iji nweta nsonaazụ na-enweghị nkwụsị mgbe niile.
Mgbe ahụ enwere njem. M na-ala n'iyi awa 3 kwa ụbọchị ịnya ụgbọ ala na-aga ọrụ m na Silicon Valley. Oge awa ndị ahụ emeghị m onye were m n'ọrụ ma ọ bụ mụ onwe m ihe ọ bụla - ọ bụ oge efu na mgbakasị ahụ gbakwunyere.
Were ya na ị na-agbake awa 3 ahụ ọbụlagodi ụbọchị 2 n'izu - awa 6 ọzọ nke nrụpụta. Na, ikekwe na-arụpụtakwu ihe na ụlọ ọrụ dị jụụ.
Ma, ọ na-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ị ka nwere ike imekọ ọnụ ma ghara ebipụ gị.
Nke a bụ naanị otu n'ime ihe m na-agabiga na-akọwa usoro nrụpụta m na-eji maka ọrụ nke m. Dịka Solopreneur, arụgoro m azụmahịa n'ịntanetị nke na-enweta ndị ọbịa nde 4.5 kwa afọ wee na-enweta ego mara mma. Ọ nweghị ụzọ m ga-esi mee nke ahụ na-enweghị ụdị nkwalite nrụpụta a.
M na-akọwa usoro m na nkuzi ịntanetị n'efu dị ebe a:
Ọ na-elekwasị anya karịsịa na mkpa nke ihe okike, yabụ enwere m olileanya na ndị na-agụ gị nwere ike irite uru.
Na-atụ anya post gị mara mma ọzọ.